कको ब’ग्दाममा नेपाली चेलीको मृ’त्यु, को हुन् उनी ? - Samachar Post Dainik
कको ब’ग्दाममा नेपाली चेलीको मृ’त्यु, को हुन् उनी ?
इराकमा सडक दु’र्घटनामा परी ए’क नेपाली चेलीको मृ’त्यु भएको छ । विगत ३ वर्षदेखि इ’राकको ब’ग्दाममा का’र्यरत पे’म्बासाङमु तामाङको नि’धन हो
।रसुवा जिल्ला आ’माछो दि’ङमो गाउँपालिका वडा नं.- ५ चि’लिमे गो’ङगाङ घर भएकी तामाङको शुक्रबार राती सडक दु’र्घटनामा प’रि नि’धन भएको त्यहाँको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ ।
उनि हाल कु’र्दिस्तान अ’र्बिल भन्ने स्था’नमा काम गर्दै आएकी थिइन् ।त्यस्तै केहि दिन अगी दु’बईमा सवारी दु’र्घटनामा एक नेपाली युवाको नि’धन भएको छ । झापाको अ’र्जुनधारा नगरपालिका-३ खु’ज्ना’बारी घर भएका कैलाश बि’श्वकर्माको गत फेब्रुअरी ४ तारिखमा सवारी दु’र्घटनामा नि’धन भएको हो ।
कम्पनीको कामबाट फर्कैदै गर्दा सवारी दु’र्घटनामा उनको नि’धन भएको थियो । १८ दिन पहिले नि’धन भएका बिश्वकर्माको श’व आज साँझ १० बजे नेपाल आइपुग्ने पारिवारिक श्रोतले बताएको छ
। मृ’तक कैलाश बिश्वकर्माको श’व श्रीमती मनु सापकोटाले सँगै लिएर आउदैछन् ।मृ’तकको श’व आजै राती गाउँसम्म पुर्याउने र भोली बिहान दा’हसंस्कार गरिने बताइएको छ । बिगत ३ बर्षदेखि दुबईमा कार्यरत कैलाशले आफु परदेशमा एक्लै भएकोले केहि गर्न नसक्ने भन्दै श्रीमतीलाई पनि दुबई बोलाएका थिए । कम्पनीमा कार्यरत श्रीमान र श्रीमतीको बसाई करिब १ घण्टाको दुरीमा रहेको थियो । पारिवारिक श्रोतका अनुसार उनीहरु केहि दिनपछि नेपाल आउने तयारी गरिरहेका थिए ।
श्रीमानको नि’धनपछी वि’क्षिप्त ब’नेकी मृ’त’क’ की श्रीमती सापकोटाले फेसबुकमा भा’वुक स्टाटस लेखेकी छन् ।उनले आफ्नो घरको पि’लर ढ’लेको र सबैको बाँ’च्ने स’हारा यति छिटै खो’सेको भन्दै भगवानसँग गु’नासो गरेकी छन् ।
साथै उनले क’लिलो उमेरमै सि’उँदोको सिन्दुर पु’छिएकाले स’माजले बि’धवा, अ’लक्षिनी आ’ईमाई भन्ने होला भन्दै बि’लौना समेत ग’रेकी छन् ।
हेर्नुहोस् उनकी श्रीमती मनु सा’पकोटाले फेसबुकमा लेखेको मा’र्मिक स्टाटस- म एक्लै केहि गर्न न’सक्ने भए मलाई तिम्रो साथ चा’हियो बु’डि भनेर मलाई बि’देश ल्या’उनु भो, तर आज मलाई यहि बिदेशी भु’मिमा ए’क्लै छा’डेर सधैको लागि टा’ढा हुनु भयो मेरो बु’डो ।
दुई बु’डाबुडी हा’स्दै रमाउदै घर जाने बेला म बा’कसमा ला’स लिएर कसरी फ’र्किउ । मेरो हजुर हजुरसँग स’म्बन्ध जो’डेको पनि जम्मा ६ ब’र्स त भयो । किन यति छोटो समयमा मलाई ए’क्लै बनाएर जानु भयो
। मेरो बाबा म’र्नुभन्दा २ दिन पहिले मेरो डि’उटीमै १० मिनेट भे’टेर जानु भयो । त्यो नै अ’न्तिम भेट भयो ।तपाईलाई भे’ट्न आउछु भनेर प’काएको मा’सु भात अ’रुले नै खाए । ह’जुरलाई भनेर कि’न्देको र’क्सी अ’झै ते’त्तिकै छ । ७ घन्टा मात्रै केहि न’भैदिए म मेरो बाबालाई भे’ट्थे । किन यति धेरै नि’ष्ठुरी भ’यौ भगवान ।
मेरो घरको पि’लर ढा’ल्यौ, हामी सबैको बा’च्ने स’हारा यति छिटै किन खो’स्यौ भ’गवान ? किन यति धेरै नि’स्ठुरी भ’यौ भगवान ? मेरो यो उमेरमा सि’उदोको सि’न्दुर
पु’छियो । मेरो बाँ’च्ने आधार भ’त्कियो । अब स’माजले मलाई बि’धबा भन्ने होला ।अ’लक्षिनी आ’ईमाई भन्ने होला । म दु’नियाँको अ’पमान स’हेर कसरी बा’चौला । हजुरले त हामिलाई छा’डेर जानु भयो । मेरा अगाडिका ठुला-ठुला जि’म्मेवारी म कसरी पुरा गरूँ । मेरो दु’धे ना’नीलाई म एक्लै कसरी हु’र्काउ । हामिलाई ज’केट लाएर चिसो हुन्छ, क’म्बल ओ’डेर चि’सो हुन्छ ।
झन् हजुर त चि’सो ब’रफमा हुनुहुन्छ । हजुरलाई झन कति धेरै चि’सो भएको होला मेरो बु’डो ।दिनमा १०० पटक का’ली भन्दै फोन गर्नुहुन्थ्यो । अब त हजुरको फोन आ’उनै छा’ड्यो । बिदेशको ठाउमा छु, मलाई
स’म्हालिदिने कोहि छैन भनेर आफैले आफैलाई स’म्हाले तर अब त स’म्हाल्न स’किन । सि’रिफ ६ दिन भयो हजुरले मलाई छा’डेर जानु भएको । यो ६ दिन त मेरा लागी ६ बर्ष झै लाग्यो भने अझै पुरा जि’न्दगी बाँकी छ । हजुर बि’ना म क’सरी बाँ’चु । अब मेरो लागि आ’काश ख’स्यो, ध’र्ती फा’ट्यो सं’साररै अ’ध्यारो भयो ।
प्रकाशित मिति ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ००:०८